Sida dibadbaxyada lagu dalbanayay in SARS lagu kala diro ay u badaleen Nigeria
Friday November, 27 2020 - 14:52:36
Wasaarada Arimaha Gudaha Oo Diiwaan Galinta Bayo Mitriga U Sameeyey Ciidanka Dab Damiska jsl
Qodobada Midowga Musharaxiinta Madaxtinimada Somaliya Soo Saareen
"Garsoorka Somaliland Dib U Habayna Aya U Baahanyahay'''xisbiga Waddani
Golaha Wasiirrada Somaliland Oo La Horkeenay Miisaaniyad Sannadeedka 2021.
Ruushka Oo Ku Baaqay In Deg-deg Dib Loogu Bilaabo Wada-hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya
Wiil Soomaali ah oo lagu dilay Magalada Idmanton ee dalka Canada
Saturday October 24, 2020 - 09:14:13 in by salman abdi
Dibadbaxyada loogaga soo horjeedo tacaddiyada booliska ee ka soconayay waddanka Nigeria ayaa waxa ay abuureen dhaqdhaqaaq xooggan oo u muuqanayay inuu gilgilay dadka awoodda haya, hasayeeshee laba todobaad oo buuq ah kaddib, tifaftiraha Laanta Afka Hausa-ha ee BBC-da, Aliyu Tanko, ayaa waxa uu eegayaa halkan meesha loogaga dhaqaaqayo.
Isu soo baxyo waddooyinka lagu dhigayay iyo gadood dhinaca baraha ay bulshadu ku wada xiriirto ayaa da'yarta Nigeria waxa ay siisay cod meesha ka saaray kala duwanaanshiyaha dhaqanka ee dalkaasi.
Markii hal ku dhigga #EndSARS uu aad u shaacbaxay, ayaa sidaas waxaa lagu caasiyay kooxaha gacanta ku haya siyaasadda dalkaasi.
In la burburiyo goobta sida wayn loo qadariyo ee oba, ama hogaamiye dhaqameedka Lagos, ayaa astaan u aheyd arrintaasi.
Dhalinyarada ayaa meelaha wareejinayay carshigiisa, waxa ay xadeen hantidiisa, sidoo kalana waxa ay ku dabaasheen meesha uu ku dabaalan jiray.
Wax ku bilowday dibadbax loogaga soo horjeedo waaxda booliska ee gaarka ah ee ka hortagta dhaca (Sars) ee la necebyahay ayaa waxa uu noqday dhabihii ay dhalinyarada ku soo bandhigi lahaayeen carada ay u qabaan dadka Nigeria maamulayay muddo tobannaan sanadood ah, waxa ayna dalbadeen in isbadel la sameeyo.
Madaxweynihii hore Olusegun Obasanjo ayaa waxa uu 2017-kii waxa uu ka digay in "dhammaantayo aynu ku dul fadhinno fuusto baaruud ah" markii ay timaado arrimaha dhalinyarada.
Hadalkiisaas waxa uu ula jeeday guud ahaan qaaradda hasayeeshee arrintaas waxa ay saamaynaysaa Nigeria, oo ah dadka ugu dalka badan Afrika laguna qiyaaso dadkiisa 200 oo milyan oo qof, kuwaas oo in ka badan 60% ay ka hooseeyaan da'da 24.
Inta badan dadka gaaray da'da shaqada ma haystaan shaqo caadi ah, fursadaha waxbarasho wanaagsan lagu heli karana waa ay yaryihiin. Bilowgii sanadkan, shaxda dowladda ayaa waxa ay muujisay in 40% dadka Nigeria ay ku nool yihiin saboolnimo.
'Ma ahan caadifad mar uun iska kacday'
Hasayeeshee dadka haatan awoodda haya ayaa markii hore khalad u fahmay waxa markan soconaya, qoraaga xuquuqda aadanaha u ololeeya, Gimba Kakanda ayaa BBCda u sheegay.
"Dibadbaxyada lagu dalbanayo in lagu soo afjaro tacaddiyada booliska ee la baxay #EndSARS ayaa markii hore waxaa loo arkay inay yihiin caadifaddii dhalinyada ee mar la aragta aheyd taas oo iska dhammaan doonto," ayuu yiri.
"Fakarka noocaas ah ee xad dhaafka ah ee ku jira siyaasiyiinta ayaa sabab u ahaa jawaabta soo daahday ee laga bixiyay dhaqdhaqaaqan aan caadiga ahayn, iyagana ka soo xirxiray fursadihii u furnaa."
Su'aasha ayaa waxa ay tahay xaguu dhaqdhaqaaqaas haatan aadayaa?
Guusha dibadbaxa ee dowladda ku qasbay inay isbadello keento - sida in ay ballanqaado in la kala diro Sars, iyo isbadel ballaaran oo lagu sameeyo booliska - ayaa dhalinyarada Nigeria waxa ay ka heleen kalsooni, waxa ayna haatan rumaysan yihiin inay isbadel samayn karaan.
Maalmihii ka horreeyay dibadbaxyada, kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa waxaa u suuragashay inay sameeyaan goob dadka laga caawiyo haddii xaalad degdeg ah ay dhacdo. Sidoo kale adeeg dhanka sharciga ah ayey diyaariyeen oo la siiyo dadka u baahdo iyagoo weliba idaacad sameeyay.
Arrimahaas waxaa lagu maalgeliyay iskaashi guud arrintaas oo tusaale u noqotay sida Nigeria ay u hagaagi karto haddii aanay siyaasiyiintu meesha ku jirin kuwaas oo badanaa u muuqda inay dantooda uun tahay sidii nafsadooda ay wax ugu heli lahaayeen, halkii ay dalka horumarin lahaayeen.
Hasayeeshee dhinac xun oo ay dibadbaxyadu wataan ayaa jira.
Halka dadka taageeray ee u soo baxay dhaqdhaqaaqa #EndSARS ay ahaayeen dad si nabadgalya ah u dibadbaxayay, haddana waxaa jiray qeyb ka mid ah dhalinyarada oo dibadbaxyada u arkayay inay fursad yihiinba.
Arbacadii iyo Khamiistii la soo dhaafay ayaa boob iyo burburin waxaa lagula kacay ganacsiyada Lagos
Waxa ay kharbudeen dukaamo, waxa ay u dhaceen bakhaaro halka ay bartilmaameedsadeen ganacsiyada ay leeyihiin siyaasiyiinta caanka ah.
Walow hab dhaqanka labada kooxood uu kala duwanyahay, haddana waxa ay ka midaysan yihiin: nacaybka ay u qabaan dadka maamulka haya.
'Buhari waxa uu seegay dulucdii'
Mas'uuliyiintu waa ay ka warhayaan in saboolnimada iyo xaaladda adag ee jirta ay halis ku yihiin ammaanka qaranka, sida uu sheegayo Mr Kakanda oo xuquuqda u ololeeya.
"Dowladda waxa ay xaqiiqsatay in carada noocan ah aanay dhayalsan karin sida hore u dhacday oo kale," ayuu intaas ku daray.
Hasayeeshee waxa ay sii wadday inay qaado tallaabooyin khaldan markii ay iskudayaysay inay xaaladda dajiso.
Khudbaddii Madaxweyne Muxamedu Buhari uu dalka u jeediyay fiidkii Khamiistii "ayuu ku seegay dulucdii hadalka", sida uu qabo Japheth Omojuwa oo barta internet-ka wax ku qora.
Mr Buhari ayaa waxa uu ku baaqay in dibadbaxyada la soo afjaro oo wadahallo la bilaabo, hasayeeshee "waxaa lagu xasuusan doonaan inuu dadka Nigeria u hanjabay xilli ay dowladooda waydiisteen inay cadaalad samayso".
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in hadda loo baahan yahay in isha lagu hayo isbadalka lagu sameynayo booliska Nigeria
Sikasta oo uu xaal ahaadaba, Mr Omojuwa ayaa waxa uu rumaysan yahay in dhaqdhaqaaqa #EndSARS wax uun lagu gaari karo.
Ma ahan in diiradda lagu saaro hammiga mustaqbalka fog ee ah in awood siyaasadeed lagu gaaro, ayuu ku doodayaa, hasayeeshee waa inay xaqiijiyaani n mas'uuliyiinta ay ka soo dhalaalaan isbadelka ay ballaanqaadeen, booliska habowsanna cadaaladda la horgeeyo.
26/11/2020 - 10:03:55
Maxaabiis Dil Toogasho Lagu Fuliyay, Magacyadooda & Wararkii Ugu Dambeeyay.
26/11/2020 - 10:00:36
Sarkaal ka tirsanaa Sirdoonka Mareykanka oo lagu dilay Soomaaliya
26/11/2020 - 09:55:07
Madaxwaynaha Deegaanka Somalida oo lagu soo Dhaweeyay Buuhoodle.
25/11/2020 - 18:04:53
Puntland oo dad u xirxirtay qarax Gaalkacyo lagula beegsaday ciidamadeeda amniga
21/11/2020 - 12:03:35
Taxanaha Buuga Caro-edeg Oo Hargeisa Lagu Soo Bandhigay
21/11/2020 - 12:00:36
Kheyre oo raaligalin ka bixiyay weerarkii saddex sano ka hor lagu qaaday guriga CC Warsame
21/11/2020 - 09:42:31
Falanqayn:- Go'aanka Lagu Soo Rogay Youtuber-da.
19/11/2020 - 16:38:16
19/11/2020 - 16:27:08
Cumar Carte Qaalib oo maanta lagu aasayo Hargeysa
19/11/2020 - 11:30:49